Uqhakambisa isiNtu ngezimpahla azikhiqizela abesifazane. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UNksz uWandile “uWanita” Ngcobo, umphathi wenkampani yemisiko eqhakambisa isintu, iWanita KaNgcobo, uyisungule ngo-2015.
“Kuyangithokozisa kakhulu ukubona abantu besifazane behlobe ngemisiko yesiNtu neqhakambisa sona. Nami ngiyasithanda kakhulu isiNtu. Okwebhizinisi-ke kona into ebihlale ikimi, ngenxa yokuthi abazali bami bebenamabhizinisi e-night club behlela nemicimbi emikhulu. Ngicabanga ukuthi okuningi ngikufunde kubona,” kulanda yena.
UNksz uNgcobo, waseThekwini, KwaZulu-Natali, uneziqu i-BA Degree in Fashion Design yaseLinea Academy School of Fashion, Art and Design.
Kuthiwa ukhamba lufuze imbiza. Uthi ukukhuliswa abazali abanamabhizinisi ngezinye zezinto ezatshala umqondo weWanita KaNgcobo.
UNksz uNgcobo ekhangisa ngeminye imisiko yakhe
Uthi eminyakeni eyisithupha esebhizinisini usekwaze ukuqasha abantu abawu-15 abaseNanda bese kuba abayisikhombisa abasebenzela e-studio sakhe esiseGlenwood.
“Kodwa-ke ngenxa (yomphumela) wegciwane iCOVID-19 nalaba base-studio basebenzela ekhaya manje bese sibonana uma kumele sihlangane kuphela. Ngingasho okwamanje ngithi nginezisebenzi eziwu-22 uma seziphelele,” kusho uNksz uNgcobo.
Amanani emikhiqizo yakhe ancike ekutheni ikhasimende lifunani futhi engakanani kodwa aqala kuR150. Uthe useke wayokhangisa ngemisiko yakhe embukisweni e-Australia, lapho afika khona wadayisa ingubo ebiza uR28 000.
Imisiko yeWanita kaNgcobo ididiyele isiNtu nesimanje
“Njengosomabhizinisi uma ubeka amanani kumele ukuqikelele ukuthi uyayenza inzuzo uma usuhlanganisa ukuthi usebenzise malini ukwenza lowo mkhiqizo,” kweluleka yena.
Njengabanye osomabhizinisi, uthi ubhubhane iCOVID-19 iliphazamise kakhulu ibhizinisi lakhe njengoba eze waphoqeka ukusuka e-studio, wayosebenzela egaraji ekhaya, lapho ayeqale khona ukusebenza.
“Kodwa-ke konke kuhambisana nebhizinisi futhi ngikholwa ukuthi uma iCOVID-19 isidlulile sizokwazi ukubuyela lapho ebesivele sikhona. Ngikuthatha njengesimo sesikhashana, angikubeki enhliziyweni ngoba loko kuzokwenza ngehluleke ukwenza ibhizinisi lami,” kusho yena.
Uthi ukuba sebhizinisini kumfundise ukukwazi ukubhekana namakhasimende ehlukene. Uthi amanye awanayo inhlonipho, okwenza kube wumqansa ukusebenza nawo. Nokho uthi ukuzifundisa ukusebenza nawo wonke umuntu kwenza ame njalo.
Kwabafisa ukuqala ibhizinisi weluleke ngokuthi bangesabi ukuqala into yabo kodwa baqale ngokwenza ucwaningo lokuthi yini abafuna ukuyenza.
“Angisiboni isizathu sokungaqali uma nje unomcabango webhizinisi, qhubeka nawo,” kucebisa uNksz uNgcobo.
Uphethe ngokuthi akubheke kakhulu manje wukuqhubeka nokusebenza ngokuzikhandla ukuze agcine esenezitolo zeWanita KaNgcobo iKwaZulu-Natali yonkana, ikakhulukazi emalokishini eminyakeni embalwa ezayo.